ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ » အရေးပေါ် Omicron သတင်း- Johnson & Johnson သည် Pfizer နှင့် Moderna ကို ပိုမိုထိရောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကနျြးမာရေးသတင်းများ • သတင်း
BNT19b162 ၏ နှစ်ချက်ထိုးစနစ်ဖြင့် ခြောက်လအကြာတွင် စီမံထားသော Johnson & Johnson COVID-2 မြှင့်တင်ပေးသည့်စနစ်သည် ပဋိပစ္စည်းနှင့် T-cell တုံ့ပြန်မှုများတွင် သိသိသာသာတိုးလာသည်ကို ပြသသည်။
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (ကုမ္ပဏီ) မှ Dan Barouch, MD, Ph.D., et al မှ ပြုလုပ်သော Janssen-sponsored COV2008 လေ့လာမှုမှ ပါဝင်သူအုပ်စုခွဲအပါအဝင် သီးခြားလွတ်လပ်သောလေ့လာမှုမှ ပဏာမရလဒ်များကို ယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) မှ Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေး (Ad26.COV2.S) ကို BNT162b2 ၏ ပင်မဆေးနှစ်ချက်ထိုးပြီးနောက် ခြောက်လကြာတွင် စီမံကွပ်ကဲသည့် Johnson & Johnson COVID-XNUMX ကာကွယ်ဆေး (AdXNUMX.COVXNUMX.S၊ နှင့် T-cell တုံ့ပြန်မှုများ။ ဤရလဒ်များသည် မျိုးရိုးဆန်သော မြှင့်တင်ခြင်း (ရောသမမွှေခြင်း) ၏ အလားအလာကောင်းများကို သရုပ်ပြသည်။ ဤရလဒ်များကို ဖော်ပြသည့် ဆောင်းပါးကို တွင် တင်ထားသည်။ နေပြည်တော်.
"တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှု မြှင့်တင်ရေးချဉ်းကပ်မှုထက် COVID-19 ဆန့်ကျင်ဘက် ကွဲပြားသော ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု အစောပိုင်း အထောက်အထားများ ရှိပါသည်" ဟု စင်တာ၏ ဒါရိုက်တာ Dan Barouch, MD, Ph.D. မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ BIDMC တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ဗေဒနှင့် ကာကွယ်ဆေးသုတေသန။ "ဤပဏာမလေ့လာမှုတွင်၊ BNT26b2 ကာကွယ်ဆေးကို အဓိကအသုံးပြုပြီး ခြောက်လအကြာတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီအား Ad162.COV2.S အား မြှင့်တင်ဆေးကို ပေးသောအခါ၊ မြှင့်တင်ပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်တွင် ပဋိပစ္စည်းတုံ့ပြန်မှုများ တိုးလာကာ ပိုများလာပါသည်။ BNT8b26 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Ad2.COV162.S နှင့် CD2+ T-cell တုံ့ပြန်မှုများ။
"ဤရလဒ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကာကွယ်ဆေးအတွက် အဖိုးတန်သော သိပ္ပံနည်းကျ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကူးစက်ရောဂါကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်မှန်းချက်ဖြင့် မြှင့်တင်ခြင်းဗျူဟာများကို အသိပေးနိုင်သည်" ဟု Mathai Mammen, MD, Ph.D., Global Head, Janssen မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ Johnson & Johnson "Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ရောနှော-ချက်-ကိုက်ညီမှု အားဖြည့်ဆေးပမာဏသည် ဟာသတုံ့ပြန်မှုများနှင့် ဆဲလ်လူလာတုံ့ပြန်မှုများကို အောင်မြင်စွာတိုးမြင့်စေကြောင်း သက်သေပြသည့် ကြီးထွားလာနေသော ဒေတာကိုယ်ထည်အား ဖြည့်စွက်ပေးသည့်အပြင်၊ Beta နှင့် Delta မျိုးကွဲများ။"
hese Phase2ဒေတာအား UK COV-BOOST တွင်ထုတ်ဝေသည့် လက်တွေ့လေ့လာမှုမှ ပဏာမရလဒ်များဖြင့် အားဖြည့်ပေးပါသည်။ the LancetBNT162b2 (n=106) သို့မဟုတ် ChAdOx1 nCov-19 (n=108) နှစ်ခုလုံးဖြင့် အဓိက ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်၊ Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ တိုးမြင့်ဆေးပမာဏသည် ပဋိပစ္စည်းနှင့် T-cell တုံ့ပြန်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို တိုးလာကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။
ဆယ်လူလာ (T-Cell) တုံ့ပြန်မှုများ
n ဤပဏာမလေ့လာမှုတွင် BNT19b162 ၏မူလကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် Johnson & Johnson COVID-2 ကာကွယ်ဆေးကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် BNT8b162 ဖြင့် မြှင့်တင်ခြင်းထက် CD2+ T-cell တုံ့ပြန်မှုများ ပိုမိုတိုးမြင့်လာပုံပေါ်သည်။ ဤ T-cell တုံ့ပြန်မှုဒေတာသည် BNT162b2 နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်လာပြီးနောက် ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုများနှင့် BNT19b162 ၏အဓိကစည်းမျဉ်းအတိုင်း Johnson & Johnson ၏ COVID-2 ကာကွယ်ဆေးနှင့် ရောနှောပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို အကြံပြုပါသည်။
Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် Janssen ၏ AdVac ကို လွှမ်းမိုးထားသည်။® CD4+ နှင့် CD8+ တုံ့ပြန်မှုများ အပါအဝင် နည်းပညာနှင့် ဆဲလ်-ကြားခံ ကိုယ်ခံစွမ်းအား။ T-cell များသည် COVID-19 ဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိ ဆဲလ်များကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် CD8+ T-cell များသည် ရောဂါပိုးရှိဆဲလ်များကို တိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ပြီး CD4+ T-cells များက ကူညီပေးပါသည်။
ဟာသ (အင်တီဘော်ဒီ) တုံ့ပြန်မှုများ
မြှင့်တင်မှုများကြောင့် Johnson & Johnson မှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှင့် BNT162b2 နှစ်ခုစလုံးသည် မူလ SARS-CoV-2 မျိုးကွဲများနှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ဘီတာမျိုးကွဲများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ပဋိပစ္စည်းအဆင့်များကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေပြီး ချိတ်တွဲထားသည့် ပဋိပစ္စည်းအဆင့်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်၊ Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ရောနှောပေါင်းစပ်မှု အားကောင်းပြီးနောက်၊ ပဋိပစ္စည်းများသည် အနည်းဆုံး လေးပတ်ကြာ ဆက်လက်တိုးလာသော်လည်း BNT162b2 ကာကွယ်ဆေးနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော တိုးမြှင့်မှုကို လက်ခံရရှိသူများတွင် ပဋိပစ္စည်းများသည် ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်မှ တစ်ပတ်အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ post-boost လေးခု။
Neutralizing antibodies များသည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ပိတ်ဆို့ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းသို့ ချုပ်နှောင်ထားသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ Binding antibodies များသည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ spike protein နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကို မဖျက်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကို အသက်မသွင်းနိုင်ပါ။
ဤလေ့လာမှုအတွက်၊ Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) ရှိ နမူနာ biorepository သည် BNT162b2 ကာကွယ်ဆေးကို လက်ခံရရှိသူများထံမှ နမူနာများကို ရယူခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများသည် biorepository တွင်ဆက်လက်နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် 30 ug BNT162b2 (n=24) ဖြင့်မြှင့်တင်ထားသည် သို့မဟုတ် COV2008 လေ့လာမှု (NCT04999111) တွင်စာရင်းသွင်းပြီး 5၊ 2.5 သို့မဟုတ် 1×10 ဖြင့်မြှင့်တင်ထားသည်10 Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေး (n=41) ၏ vp။ COV2008 လေ့လာမှုသည် အသက်2နှစ်နှင့်အထက် လူကြီးများတွင် ၎င်း၏ COVID-31518 ကာကွယ်ဆေးကို အားဖြည့်ပေးသည့်အနေဖြင့် အကဲဖြတ်ရန် အဆင့် 2008 မျက်စိကွယ်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု (VAC19COV18) မှ ပံ့ပိုးကူညီထားသည့် Johnson & Johnson ၏ လုပ်ဆောင်ဆဲဖြစ်သည်။
US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) မှ ကာကွယ်ဆေးထိုးအလေ့အကျင့်များဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မတီ (ACIP) မှ Johnson & Johnson မှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော COVID-18 ကာကွယ်ဆေးကို လက်ခံရရှိသည့် အသက် 19 နှစ်နှင့်အထက် အရည်အချင်းပြည့်မီသူအားလုံးအတွက် အားကောင်းချက်အဖြစ် အကြံပြုထားသည်။
Johnson & Johnson သည် လိုအပ်သလို လိုအပ်သလို ဒေသန္တရ ကာကွယ်ဆေး စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဗျူဟာများအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) နှင့် အမျိုးသား ကာကွယ်ဆေးထိုးနည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့များ (NITAGs) ထံသို့ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဆက်လက်တင်ပြပါသည်။
တောင်အာဖရိကနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်လျက်ရှိပြီး ယခုအခါ အသစ်နှင့် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါသည်။ Omicron အမျိုးအစား. ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် Omicron သီးသန့်မျိုးကွဲကာကွယ်ဆေးကို လိုက်ရှာနေပြီး လိုအပ်သလို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကပ်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဘက်စုံသုံး ချဉ်းကပ်မှုဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ- www.jnj.com/covid-19.
Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို Janssen COVID-19 Vaccine ဟုလည်းရည်ညွှန်းပြီး၊ ပြင်းထန်စူးရှသောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည့် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကိုကာကွယ်ရန် အရေးပေါ်အသုံးပြုမှုခွင့်ပြုချက် (EUA) အောက်တွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ရောဂါလက္ခဏာစု coronavirus2(SARS-CoV-2)။
Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက် မူလကာကွယ်ဆေးထိုးစနစ်သည် အသက် 0.5 နှစ်နှင့်အထက် လူတစ်ဦးချင်းစီအား တစ်ကြိမ်ထိုးဆေး (18 mL) ဖြစ်သည်။
Janssen COVID-19 Vaccine Booster dose (0.5 mL) တစ်ခုတည်းကို အသက်2နှစ်နှင့်အထက် လူတစ်ဦးချင်းစီအား မူလကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 18 လအကြာတွင် စီမံနိုင်ပါသည်။
Janssen COVID-19 Vaccine (0.5 mL) ၏ တစ်ခုတည်းသော အားဖြည့်ဆေးပမာဏကို အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက် လူတစ်ဦးချင်းစီအား အခြားခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အပြီးတွင် ကွဲပြားသော တိုးမြှင့်ထိုးဆေးအဖြစ် ပေးနိုင်ပါသည်။ မျိုးရိုးလိုက်သော မြှင့်တင်ပေးသည့်ပမာဏအတွက် သောက်သုံးသောကာလသည် မူလကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကာကွယ်ဆေး၏ တိုးမြှင့်ထိုးဆေးအတွက် အခွင့်အာဏာနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် အောက်ပါတို့အပါအဝင် သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအားလုံးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသူအား ပြောပြပါ။
သွေးထွက်လွန်ရောဂါရှိခြင်း (သို့) သွေးပါးလွှာခြင်း
immunocompromised သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်စေသော ဆေးတစ်မျိုးတွင် ရှိနေပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။
နောက်ထပ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးလည်းရပြီးပြီ
အကယ်၍ သင်သည် Janssen COVID-19 Vaccine ကို မခံယူသင့်ပါ။
ဤကာကွယ်ဆေး၏ မည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းကိုမဆို ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်မှု တုံ့ပြန်မှုရှိသည်။
Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ကြွက်သားထဲသို့ ထိုးဆေးအဖြစ် သင့်အား ပေးမည်ဖြစ်သည်။
မူလကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း- Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်တည်းအဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။
Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ တစ်ခုတည်းသော အားဖြည့်ဆေးပမာဏကို Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖြင့် အဓိက ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး နှစ်လခန့် စီမံနိုင်ပါသည်။
Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ တစ်ခုတည်းသော အားဖြည့်ဆေးပမာဏကို အခြားခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော COVID-18 ကာကွယ်ဆေးဖြင့် မူလကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသော အသက် 19 နှစ်နှင့်အထက် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် boost dose ၏အချိန်ကိုစစ်ဆေးပါ။
Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖြင့် အစီရင်ခံထားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပါဝင်သည်-
ဆေးထိုးသည့်နေရာ တုံ့ပြန်မှုများ- နာကျင်ခြင်း၊ အရေပြားနီခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်း။
အထွေထွေဘေးထွက်ဆိုးကျိုး- ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း။
lymph node များရောင်ရမ်းခြင်း။
အရေပြားတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ခံစားမှု (ဥပမာ ယားယံခြင်း သို့မဟုတ် တွားသွားခြင်း) ( paresthesia ) ၊ အထူးသဖြင့် အရေပြားတွင် ခံစားမှု (သို့) အာရုံခံနိုင်စွမ်း ကျဆင်းခြင်း (hypoesthesia)။
နားထဲတွင် အဆက်မပြတ်မြည်ခြင်း (tinnitus)။
Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်သည့် တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အဝေးမှ အခွင့်အလမ်း ရှိပါသည်။ Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနောက် မိနစ်အနည်းငယ်မှ တစ်နာရီအတွင်း ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် သင့်အား ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသူသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်အတွက် သင့်ကာကွယ်ဆေးရရှိသည့်နေရာတွင်နေရန် သင့်အား တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှု လက္ခဏာများ ပါဝင်နိုင်သည်-
မျက်နှာနှင့် လည်ချောင်းများ ရောင်ရမ်းခြင်း။
Platelets နည်းပါးသော သွေးခဲများ
ဦးနှောက်၊ အဆုတ်၊ ဝမ်းဗိုက်နှင့် ခြေထောက်များရှိ သွေးကြောများ ပါဝင်သော သွေးခဲများ (သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ သွေးမတိတ်စေရန် ကူညီပေးသော သွေးဆဲလ်များ) နှင့်အတူ Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို လက်ခံရရှိသော လူအချို့တွင် ဖြစ်ပွားသည်။ ဤသွေးခဲများနှင့် platelets များနည်းသောသူများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပြီးချင်းမှနှစ်ပတ်ခန့်တွင်စတင်သည်။ ဤသွေးခဲများနှင့် သွေးဥဆဲလ်များ နိမ့်ကျမှုကို အစီရင်ခံခြင်းသည် အသက် 18 နှစ်မှ 49 နှစ်ကြား အမျိုးသမီးများတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းက အဝေးကြီးပါ။ Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရရှိပြီးသည့်နောက်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိလျှင်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူသင့်သည်။
ပြင်းထန်သော သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် ခေါင်းကိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြင်မှုန်ဝါးခြင်း၊
ထိုးဆေးထိုးသည့်နေရာထက် အရေပြားအောက်ရှိ သေးငယ်သော ပွန်းပဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးကွက်များ။
၎င်းတို့သည် Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မဟုတ်ပါ။ ပြင်းထန်ပြီး မမျှော်လင့်ထားသော သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် လေ့လာနေဆဲဖြစ်သည်။
Guillain Barré ရောဂါစု
Guillain Barré Syndrome (ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်မှ အာရုံကြောဆဲလ်များကို ပျက်စီးစေပြီး ကြွက်သားအားနည်းခြင်းနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ လေငန်းတက်ခြင်း) သည် Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ခံယူထားသူအချို့တွင် ဖြစ်ပွားသည်။ ဤလူအများစုတွင် Janssen COVID-42 ကာကွယ်ဆေးရရှိပြီး ၄၂ ရက်အတွင်းရောဂါလက္ခဏာများစတင်ခဲ့သည်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ အလားအလာ အလွန်နည်းပါတယ်။ Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရရှိပြီးသည့်နောက်အောက်ပါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်ပါကချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူသင့်သည်။
အထူးသဖြင့် ခြေထောက် သို့မဟုတ် လက်များတွင် အားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် နာကျင်ခြင်း ခံစားမှုများသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။
စကားပြောခြင်း၊ ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် မျိုချခြင်း အပါအဝင် မျက်နှာလှုပ်ရှားမှုများ ခက်ခဲခြင်း။
နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်လုံးမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း။
ဆီးအိမ်ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် အူလမ်းကြောင်းလုပ်ဆောင်မှုတွင် ခက်ခဲခြင်း။
9:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 06, 09
ဤထုတ်ကုန်တွင် သတိပေးချက်များနှင့် ဆိုးရွားသော တုံ့ပြန်မှုများ များစွာရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Alex Baldwin ကဲ့သို့ ဘေးကင်းလုနီးပါးဖြစ်သည်။ ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကို ရပ်တန့်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ဒါမှမဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်မှန်သမျှကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့၊ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဇီဝလက်နက်တွေကို ဒီဇီဝလက်နက်တွေ များများစားစားရှိစေချင်လို့ သူတို့ တကယ်ဆန္ဒရှိချင်ပါတယ်။